web 2.0 ပြProbleနာရှိရင် ... | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 3, 2008 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
လူမှုရေးကွန်ရက်စွဲလမ်းသူအသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဒေါက်တာသောမတ်စ်ဟိုကျွန်ုပ်သည်သူအသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့ဆွဲဆောင်ခံခဲ့ရသည်၊ Profilactic.com.
အပေါ်ကဗီဒီယို (မှတဆင့်နှိပ်လိုက်ပါ Profilactic ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ခဲ့သောဝစ်ဂျက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပိုင် ၀ က်ဘ် 2.0 ဆိုဒ်များအားလုံး၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည် စာမျက်နှာအကြောင်း။ ငါပြaနာရှိသည်ထင်!
Tags: PR ဖြန့်ဖြူး
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ9နာရီ 03 မိနစ်
ဟီးဟီး အဲဒါက မင်းအဲဒီမှာ စုစည်းမှုတော်တော်လေး 🙂 ငါ web 2.0 ဆိုက်တွေ အရမ်းများနေပေမယ့် အဲဒါနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး 😉
မေးချင်တာတစ်ခုက အဲဒီဆိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်မှာ သင် အမှန်တကယ်တက်ကြွနေပါသလဲ။ 😉
ဇန်နဝါရီလ3ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ9နာရီ 13 မိနစ်
သူတို့ထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်က တက်ကြွနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ကြိုကြားကြိုကြားပါပဲ။ တစ်ခါတရံ လအနည်းငယ်ကြာအောင် ကျွန်တော် မလည်ပတ်နိုင်ပေမယ့် နောက်တော့ ဆိုက်မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ဆက်နေခဲ့တယ်။
အလုံးစုံ? အချိန်တွေ အရမ်းများလွန်းတယ်!